I-Kangaroo ILizwi Inkcazo kunye nemizekelo yesiNgesi
Igama le-Kangaroo lixesha elidlalayo legama elifaka ngaphakathi kuyo into efanayo -njengokulawula ( ukulawula ), indolent ( engenzi lutho ), kwaye ukhuthaze ( unxuse ). Yaziwa nangokuthi i- marsupial okanye igama lokugwinya .
Kukholelwa ukuba i-synonym (ebizwa ngokuba yi joey ) kufuneka ibe yinxalenye efanayo yentetho njengoko igama le-kangaroo kunye neeleta zalo kufuneka zivele ngendlela.
Igama elithi kangaroo liye lapapashwa ngumlobi uBen O'Dell kwinqaku elifutshane kwi -American American Magazine , ngo-1956.
"Kutheni sibabiza ngokuthi ngama-kangaroo amagama ?" Akunjalo ngenxa yokuba bevela e-Australia. "Kunoko, lawa magama angama-marsupial aphethe iinguqu ezincinci ngokwabo." Ngoko 'ukuphumula' 'kukuphumla,' ' umqeqeshi 'uye' umfundisi, 'kunye' nokukhawuleza 'kuye' kunqumla. ' Ngamanye amaxesha igama le-kangaroo linama-joey angaphezu kweyodwa. Igama elithi 'umthendeleko' linokuphindwa kathathu, 'ludla,' 'ludla,' kwaye 'ludla.' Ekugqibeleni, iziqinisekiso ezimbini: igama elithi joey kufuneka libe neencwadi zalo ngokubhekiselele kwigama le-kangaroo yomzali, kodwa ukuba zonke iileta ziseduze, umzekelo, nwabele / uvuyo, alufaneleki. "
(Anu Garg, enye iLizwi ngelilanga . Wiley, 2005)
"Phakathi kwamagama angama-kangaroo athengisa ubuhlobo kunye novuyo ngabo bafihla ii-joeys ezininzi. Makhe sizenzele i-perambulate, i-ramble, kwaye sihambele umboniso wezinto eziphilayo. Vula isikhephe kwaye ufumane i- can kunye ne- tin . nidla , nidla kwaye nondla.Ukuba uhla kakhulu, ubola kwaye ufe .
Inqwelo inqwelo kunye nenqwelo . Isiseko esisisiseko sibabini kunye nefonti . Ngaphakathi kwemida kamasipala uhlala kwisixeko kunye nomanyano , ngelixa uluntu lubandakanya indawo kunye nomzi . "
(URichard Lederer, i -Word Circus: Incwadi-Incwadi epheleleyo.I- Merriam-Webster, 1997)
"I-ANTI-KANGAROO IWORD: n. Kwiilwimi zokuzonwabisa , igama eliqulethekisa into yalo. 'Igama le- covert ligama elichasene nekangaroo kuba liqukethe ngaphezulu .'"
(Rod L. Evans, Thingamajigs kunye ne-Whatchamacallits: Imigaqo engaqhelekanga kwizinto eziqhelekileyo . Perigee, 2011)
Umbono woThathu woBonwa ngabantu
AbaQuquli okanye iiVandi eziPhambili ngesiNgesi ngegrama
Yintoni iCopula verb?
Ziziphi ii-Movie eziphambili ze-Jennifer Aniston?
I-Inspirational Johnny Romano Skateboarding Story
ULi Po: Omnye weeNgqobanzi eziLazileyo zaseChina
Ukuphupha kweXanadu: Isikhokelo sikaSamuel Taylor Coleridge imbongo "Kubla Khan"
Yiya kwiKholeji ngaphandle kweDiploma yesikolo esiphakeme
I-Amerigo Vespucci, i-Explorer ne-Navigator